Accueil > Gazetin'ny nosy > Nisahotaka i Toliara: Mpitarika posy maherin’ny 60 voasambotra
Nisahotaka i Toliara: Mpitarika posy maherin’ny 60 voasambotra
Tsy misy zavatra mandeha amin’ny laoniny intsony eto amin’ity Madagasikara ity ary mbola nanaporofo izany ny zava-nitranga tany Toliara, omaly. Nisahotaka ny mponina tany an-toerana noho ny fisian’ireo andian’olona maro nidina an-dalambe, nitondra hazo sy kalaza eran’ny tanàna, nitaky ny hanolorana azy ireo ilay lehilahy nahavanon-doza ka nahafaty tovovavy iray, ny 27 febroary lasa teo. Raha tsiahivina dia maty tao anaty trano ilay tovovavy avy eo navoaka tany an-tokontany ny fatiny. Ny tena nampivarahotsana ny mponina tany an-toerana dia nesorina ny voamason’ity tovovavy ity iray tamin’ny fotoana namonoana azy. Raha hiverenana kosa ny zava-nitranga omaly dia saika mpitarika posy avokoa ny ankamaroan’ireto vatan-dehilahy maro nitondra hazo sy kalaza nidina an-dalambe ireto. Zavatra tsotra no notakian’ireto farany dia ny hanolorana azy ireo an’ilay lehilahy nahavanon-doza, izay tsy iza fa sakaizan’io tovovavy maty novonoina io ihany. Tsara ny mampahatsiahy fa tany amboalohany, rehefa voasambotra ny nahavanon-doza, dia notakian’ny fianakavian’ilay tovovavy sy ireo namany Antandroy mpianatry ny oniversite ny hanolorana ilay lehilahy amin’ny Dinabe. Raha ny fantatra dia nangataka omby miisa 33 ny fianakavian’ity vehivavy maty novonoina ity ary entina any amin’ny tanindrazany izay handevanana azy. Rehefa nandeha anefa ny andro, tsy nisy resaka mihitsy ny momba izay fangatahana izay ka sorena ireo Antandroy fianakavian’ny maty. Nisy omaly ny fifampiresahana niarahana tamin’ny lehiben’ny farita Atsimo Andrefana mba hitadiavana ny marimaritra iraisana, saingy tsy nisy na inona na inona tapaka. Tao aorian’izay no nanapa-kevitra ny hidina an-dalambe ireo mpitarika posy avy amin’ny foko Antandroy ary nitaky ny hanolorana azy ireo an’ilay lehilahy nahavanon-doza. Mazava ho azy fa niezaka nisakana azy ireo ny mpitandro filaminana ka raikitra teo ny fifandonana ary nirefodrefotra baomba mandatsa-dranomaso. Raha ny loharanom-baovao dia fantatra fa olona maherin’ny 60 no voasambotra nandritra ity fifanjevona niseho tany Toliara omaly ity.
Omby vavy maty ao Andranomanelatra: Miditra an-tsehatra ny ambasady amerikanina
Anisan’ireo vaovao niteraka resabe teto amin’ny firenena, nanomboka tamin’ny talata lasa teo, ny fahafatesan’ireo omby vavy be ronono ao amin’ny orinasa AAA ao Andranomanelatra. Voalaza fa matin’ny hanoanana ireto omby vavy ireto satria tsy misy afaka manome hanina intsony noho ny sakana ataon’ny mpitandro filaminana izay manatanteraka ny baikon’ny fitondram-panjakana. Zavatra tsy nisy nanampo anefa no nitranga omaly satria dia namoaka fanambarana tamin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera Facebook ny ambasady amerikanina eto amintsika, niresaka mikasika ity raharaha fahafatesana omby ao Andranomanelatra ity. Voalaza ao anatin’izay fanambarana izay fa hatrany amboalohany dia nanaraka akaiky ny raharahan’ny orinasa AAA ao Andranomanelatra ny masoivoho amerikanina eto amintsika. Ankehitriny kosa dia angatahan’izy ireo ny préfet-ny Faritra Vakinakaratra sy ny tribonaly ao Antsirabe mba hitady vahaolana maika ho an’ireto omby matin’ny hanoanana ireto. “Tsy misy hidiran’ireo biby ompiana ao amin’io orinasa AAA io ny fifanolanana misy eo aminy sy ny fanjakana ka tsy tokony hampijaliana tahaka izao ireo biby tsy manan-tsiny ireo”, hoy ny ambasady amerikanina. Ho an’ireo mpomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia rariny sy hitsiny izao fanambarana nataon’ny Amerikanina izao, saingy tsy izany kosa ny fahitan’ireo olom-pirenena mpanara-baovao izay mijery sy mandinika ny raharaham-pirenena amin’ny fomba fijery mahitsy. Ho an’ireto farany dia mampametra-panontaniana ihany ny antony mahatonga ny masoivoho amerikanina miditra an-tsehatra na mijabaka ao anatin’ity raharahan’ny orinasa AAA an-dRavalomanana ity. Betsaka ny zavatra tsy rariny miseho eto Madagasikara kanefa tsy ahenoina feo tahaka izao ny masoivoho amerikanina. Fanontaniana iray mipetraka moa ny hoe: “namoaka fanambarana tahaka izao ve ny Amerikanina raha toa ka tsy fananan’ingahy Marc Ravalomanana ny orinasa AAA misy an’ireto omby vavy be ronono matin’ny hanoanana ireto?